တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Manouria - ဝီကီပီးဒီးယား
Clade: Nephrozoa [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Superphylum: Deuterostomia [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
မျိုးပေါင်းစု: Chordata [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Clade: Craniata [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
မျိုးပေါင်းစုသေး: Vertebrata [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Infraphylum: Gnathostomata [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Clade: Eugnathostomata [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Clade: Teleostomi [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Superclass: Tetrapoda [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Clade: Reptiliomorpha [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Clade: Amniota [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Clade: Sauropsida [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
မျိုးပေါင်း: Reptilia [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Clade: Eureptilia [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Clade: Romeriida [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Clade: Diapsida [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Clade: Neodiapsida [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Clade: Sauria [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Clade: Pantestudines [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Clade: Testudinata [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
မျိုးစဉ်: Testudines [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
မျိုးစဉ်သေး: Cryptodira [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Infraorder: Eucryptodira [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Clade: Polycryptodira [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Superfamily: Testudinoidea [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
မျိုးရင်း: Testudinidae [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
မျိုးစု: Manouria [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
ဝီကီပီးဒီးယားတွင် Manouria အကြောင်း ဆောင်းပါးမရှိသေးပါ။ ဖန်တီးရေးသားခြင်းဖြင့် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်လက်ရှိ ကြည့်ရှုနေသော စာမျက်နှာတွင် Manouria ၏ သိပ္ပံနည်းကျ အမျိုးအစားခွဲခြင်း အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.
Taxonomic references: "Turtles of the world, 2010 update: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution and conservation status" (2010-12-14). Chelonian Research Monographs 5: 000.116-000.123.
Parent's taxonomic references: "Turtles of the world, 2010 update: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution and conservation status" (2010-12-14). Chelonian Research Monographs 5. doi:10.3854/crm.5.000.checklist.v3.2010.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Manouria&oldid=420331" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၂၀:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။